I-10 eziphezulu kakhulu kwiIyunivesithi e-Australia kunye neMali yabo yokuFundisa i-2022
Olu luluhlu lweeYunivesithi ezilishumi zexabiso eliphantsi eOstreliya kubo bobabini abafundi bamazwe aphesheya kunye nabasekhaya ngenani elithile ababiza ngalo njengemali yokufunda.
Kuba abafundi basekhaya basondele kwezi zikolo xa kuthelekiswa nabafundi bamanye amazwe, sigxile ekuboneleleni ngolwazi olufunekayo ngakumbi ngabafundi bamanye amazwe kodwa oko akupheleli kugxininiso lwethu lokubonelela ngolwazi olufanelekileyo kubafundi ukuze bakwazi ukwenza ukhetho olufanelekileyo lwemfundo / lokufunda kunye Kwakhona banamathuba okufunda afumanekayo kunye neengxowa-mali ezikhoyo.
Ostreliya yenye yezona ndawo zaziwayo zokufunda-phesheya kwaye abafundi bamanye amazwe bafuna amathuba okufunda e-Australia yonke imihla.
Inani lee-scholarship ezifumanekayo kubafundi bamazwe ngamazwe ukuba bafunde e-Australia likhulu kakhulu njengoko sabelana ngamathuba okufunda ahlukeneyo e-100 e-Australia minyaka le apha study abroad nations.
Abafundi bethu ababhalisiweyo bafumana ezi nkxaso-mali zonke zishwankathelwa kwaye zithunyelwe nge-imeyile kubo simahla ekupheleni kwemihla ngemihla ukuze babenokwenza isicelo ngokulula. Ukuba awubhaliswanga kuhlaziyo lwethu lwasimahla lwebhlog, Cofa apha ukuze ubhalisele simahla.
Akukho iidyunivesithi zifundo ziphantsi e-Australia njengoko kukho izifundi. Eyona yunivesithi yexabiso eliphantsi eOstreliya yiDyunivesithi yaseSunshine Coast ehlawulisa abafundi bamanye amazwe imali yokufunda ye- $ 23,200 yeenkqubo zesidanga sokuqala.
Iiyunivesithi ezidweliswe ngezantsi zezona yunivesithi zibiza ixabiso eliphantsi ezilishumi e-Australia ezineefizi zokufunda eziqala kwi- $ 23,200 ukuya kwi- $ 27,400.
Ngaphambi kokuba siqhubeke, ndibhalile malunga neeyunivesithi kwamanye amazwe imali yokufunda iphantsi kwaye ndingathanda ukukunceda ukuba ufikelele kolu bhaliso lukhulu lophando.
Ngamaxesha athile ekuqaleni kwalo nyaka ndibhale malunga iidyunivesithi eziphantsi eCanada Ngesixa esimalunga neyunivesithi nganye ihlawulisa njengemirhumo yokufunda. Ukulandela olo luluhlu lwezinye iiyunivesithi ezininzi eziphantsi kwihlabathi liphela ezinye zazo endibonelele ngazo kwikhonkco elingezantsi.
Izifundo zeDyunivesithi eziphantsi eAndorah ngeenkqubo ezikhoyo zokufunda
IiNyuvesi eziNcinci zokuFunda eCarlifonia
IiNyuvesi eziNcinci zokuFunda eAlbania kunye nabo.
IiNyuvesi eziNcinci zokuFunda eArmenia ngenkqubo yabo yokubonelela kunye neenkcukacha zesicelo.
IiNyuvesi eziPhantsi zeFuition eFransi Okwangoku kunye nendlela yokufunda apho.
Ngaphandle kwezi, sinamanqaku aliqela apha kwiidigri ezingabizi, iinkqubo, kunye neeyunivesithi zombini ezikwi-Intanethi nakwi-intanethi. Ungasebenzisa iqhosha lokukhangela kwibar esecaleni ukukhangela la manqaku.
Ukuthatha ukugxila kwethu kwiiyunivesithi ezingabizi kakhulu zaseAustralia, apha ngezantsi luluhlu lwam oluphantsi lweeyunivesithi eziseOstreliya kwiinkqubo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala.
Uluhlu luhlelwe ngokwahlukeneyo, eyokuqala yeyokuqala Iinkqubo zesidanga sokuqala kwaye eyesibini yeyenkqubo yesidanga sokuqala.
IiYunivesithi ezingabizi kakhulu eOstreliya
Iidyunivesithi eziphantsi zokufunda e-Australia kwiinkqubo zesidanga sokuqala
Iiyunivesithi ezinentlawulo ephantsi kwiidolophu ezinkulu zaseOstreliya
Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eMelbourne
Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eSydney
Ixabiso eliphantsi kwiiyunivesithi ePerth
Imirhumo ephantsi yeenkosi kunye nee-MBAs
I-10 eziphezulu kakhulu kwiIyunivesithi e-Australia kwiiprogram ze-Undergraduate kunye neerhafu zabo
KwiYunivesithi yaseSunshine Coast
Imali yesikolo: $ 23,200- $ 28,600
KwiYunivesithi yaseQueensland yaseMzantsi
Imali yesikolo: $ 24,400- $ 32,000
University of Charles Sturt
Imali yesikolo: $24,800 - $29,760
Federation University yaseAustralia
Imali yesikolo: $ 25,100- $ 28,800
University Cross University
Imali yesikolo: $ 25,200- $ 30,800
IYunivesithi yamaKatolika yase-Australia
Imali yesikolo: $ 25,248- $ 22,936
ICharles Darwin Yunivesithi
Imali yesikolo: $ 25,500- $ 33,480
KwiYunivesithi yaseNew England
Imali yesikolo: $ 26,250- $ 29,400
KwiYunivesithi yaseWest Sydney
Imali yesikolo: $ 26,760- $ 31,440
Imali yesikolo: $ 27,400- $ 31,600
Ezi Yunivesithi zezona yunivesithi zibiza ixabiso eliphantsi eOstreliya zinika isidanga sebhatshela.
Kwiiyunivesithi eziphantsi zokufunda ezinika isidanga se-Australia, jonga icandelo elingezantsi.
I-10 eziphezulu kakhulu kwiiyunivesithi ezingabizi kakhulu eAustralia kwiiMasters ngeentlawulo zabo
Imali yesikolo: $ 26,600- $ 25,600
Imali yesikolo: $ 26,950- $ 31,100
Imali yesikolo: $ 27,120- $ 29,520
Imali yesikolo: $ 22,720- $ 27,960
Imali yesikolo: $ 25,400- $ 28,800
Imali yesikolo: $ 26,250- $ 31,500
Imali yesikolo: $ 27,680- $ 31,920
Imali yesikolo: $ 29,484- $ 36,768
Imali yesikolo: $ 16,000- $ 29,712
IYunivesithi yamaKatolika yase-Australia (eSydney, eMelbourne, eBrisbane, eCanberra)
IYunivesithi yaseNtshona Sydney (eSydney)
IYunivesithi yaseVictoria (eMelbourne)
IYunivesithi yaseFlinders (Adelaide)
IYunivesithi yaseCanberra (Canberra).
IYunivesithi yamaKatolika yaseOstreliya.
Zombini ziseta iifizi zokufunda zabafundi bamanye amazwe ukuqala phantsi $ 25,000.
I-ACU iyunivesithi yamazwe amaninzi enobukho obomeleleyo baseMelbourne. Ngaphandle kwegama, i-ACU ivulelekile kubantu bazo zonke iinkolo.
IYunivesithi yaseVictoria isekwe kumadlelo asentshona kodwa inezixhobo zokufundisa kumbindi wesixeko.
Enye iyunivesithi yaseMelbourne eneefizi zokufunda rhoqo ngezantsi $30,000 ngonyaka ngu I-Swinburne.
ISydney ineeyunivesithi ze-6 ezisekwe esixekweni, ezimbini phakathi kuluhlu oluphakathi ukuya kwezantsi.
IYunivesithi yamaKatolika yase-Australia yeyona yunivesithi yexabiso eliphantsi eSydney, enefizi yokufunda eyi- $ 23,000 ngonyaka.
KwiYunivesithi yaseWest Sydney Okulandelayo, kukho iifizi zabafundi bamanye amazwe ukuqala $25,000.
Indawo enkulu yePerth ineeyunivesithi ezi-5. Eyona yunivesithi ibiza ixabiso eliphantsi ePerth yiDyunivesithi yaseEdith Cowan enemirhumo ephakathi yabafundi bamazwe aphesheya $30,000.
IYunivesithi yaseMurdoch yiyunivesithi yesibini yexabiso eliphantsi ePerth yase-Australia.
Imirhumo yokufunda kwiidigri zemasters, kubandakanya ii-MBAs, ziyahluka phakathi kweeyunivesithi kunye nezifundo. Uluhlu lwemirhumo yokufunda sisikhokelo esihle sokuthelekisa iifizi zezifundo zeekhosi zemfundo.
Phawula: iifizi zonyaka (i-2 semesters) kunye needigri zenkosi ziyahluka kubude ukusuka kwi-1-2 iminyaka yokufunda ngokusisigxina (i-2-4 semesters).
I-Sunshine Coast, iYunivesithi yase-Edith Cowan, kunye ne-CQUniversity nikela ngee-MBAs ezingabizi kakhulu e-Australia.
iiyunivesithi zaseOstreliyaIxabiso eliphantsi lase-AustraliaIidigri ezingabizi e-australiaIiyunivesithi ezingabizi kakhulu eOstreliyaiidyunivesithi eziphantsi e-Australiaigraduateiiyunivesithi e-Australia
Post Previous:UluLungiselela njani uLuhlu lokuKhangela kuTyelelo lweSikolo seHlabathi